Teori Pärm 2
Waa soo gaabinayaa ama istaagayaa si aan u tusiyo inaan ku fekerayo/damacsanahay inaan iyada marka hore daynayo inay marto
Waan wadayaa, maadaama ay waajib ku tahay inay i sugto
Waan wadayaa, maadaama aan isha ka xidhiidhnay oo aan arko inay rabto inay sugto intaan ka marayo
Waxaad ku timid god (tunnel), sidee ayuu aragaaga u saamaynayaa?
Waxaa si ka yar oo ka degan loo wareejiyaa isteerinka
Waxaa si fiican looga arkaa muurayad-haadka xagga dambe
Masaafada joogsiga (stoppsträcka) ayaa gaabata
Waxaa badan halista ah in la helo aragtida xadaysan (tunnelseende)
Laydhka gawaarida kala haga wuxuu tusinayaa casaan/gaduud. Ma kaxayn kartaa mise waa inaad istaagtid xaaladan?
Waan kaxayn karaa, maadaama uu gaadhiga iga hor imaanayaa uu iga istaagi doono sida ay calaamada wadaduba tilmaamayso
Waan kaxayn karaa, laakiin waa inaan marka hore gawaaarida iga hor imaanaysa u daayo inay iga hor wadaan sida ay calaamada jidkuba tilmaamayso
Aniga ayaa wadaya
Waxaad waddaa baabuur qof gaar u ah. Xaaladahaan mid kamid ah miyay kuu banaantahay inaad baabuur kale dhaaftid?
Haa, laakiin xaaladda B oo kaliya
Haa, laakiin xaaladda C oo kaliya
Haa, laakiin xaaladda A iyo B oo kaliya
Haa, laakiin xaaladda A oo kaliya
Sidee u dhaqmaysaa markii lagu dhaafayo ama baasayo?
Waxaan kordhinayaa xawliga/xawaaraha si aan uga hor tago dhaafitaanka
Waxaan gaadhiga u badinayaa xagga wadada bartameheeda si aan u muujiyo inaysan haboonayn in la i dhaafo
Waxaan gaadhiga u badinayaa xariiqda-qarka wadada si aan u fudududeeyo dhaafitaanka
Gawaadhida cusub waxaa ku rakiban hab u dhis amaan. Ma jiraa wax ay ku xuntahay arrintani?
Haa, waxay keeni kartaa inay darawaliinta qaarkood khatar weyn u babac dhigaan.
Maya, hab udhiska amaanka ee gawaadhidu waa uun wax wanaagsan
Maya, waxay ka dhigaysaa in darawaliinta oo dhami xoogga saaraan wadada iyo taraafiga
Haa, waxay adkeyn kartaa in gaadhiga la wado ama la kaxeeyo
Xaaladee xaaladahaan kamid ah ayaa laguu oggolayn inaad istaagitd?
Waxaad waddaa gaadhi buudhi ku xiranyahay, wadaduna baraf ayaa jira. Maxaa sax ah oo ku saabsan taayarada musbaarada leh iyo isku xirka la isku xirayo gaadhi iyo buudhi?
Haddii buudhigu leeyahay taayarada musbaarada leh waa inuu gaadhiguna lahaadaa
Hadii gaadhigu leeyahay taayarada musbaarada leh, buudhiguna waa inuu lahaadaa
Waxaad waddaa baabuurka aad warbixintiisa ku aragto warqaddan caddaynta diiwaangelinta. Waxaad haysataa bagaash culayskiisu yahay 400 kg. Ma laguu oggolyahay inaad sidoo kale rakaab qaadatid?
Sidee baad u dhaqmaysaa haddii aad doonaysid inaan u leexatid dhinaca bidix?
Waxaan istaagayaa meesha xariiqda-istaaga (stoplinje) oo waxaan sugayaa intay iga soo dhaafayaan baabuurta iga hor imaanaysa
Waan wadayaa, maadaama ay baabuurta iga ho imaanaysa ay haystaan laydh casaan/ gaduud ah.
Waan wadayaa, maadaama baabuurta iga hor imaanaysa ay aniga iga leexanayaan
Waxaan u wadayaa aayar inta ay igasoo dhaafayaan babuurta iga hor imaanaysa
Sidee baad u dhaqmaysaa xaaladan?
Dhinacaygaan ku ekaanayaa oo dhaafayaa
Hoonka ku yeeri intaanan dhaafin ka hor si aan si cad u tuso waxaan damacsanahay
Waan leewarinayaa si aan dhaafitaanka uga dhigo mid manfac leh (effektiv)
Si aayar ah ayaan u dhaafayaa, anigoo masaafo fiican u jirsanaya dhinacooda
Maxay tusinaysaa calaamadaan wadada?
isgoys tareemeed aan lahayn isbaaro
isgoys tareen oo wadooyin dhawr wado tareemeed ay yaallaan
isgoys tareemeed oo leh isbaaro
isgoys mootada barafka wadadeeda aad goonayso
isgoys tareen oo hal wado tareemeed ah ay taallo
Maxaad samaynaysaa hadaad dareentid daal ama hurdo?
Waxaan kordhinayaa kulaylka gaariga si ay iigu fudududaato inaan soo jeedo
Waan joojinayaa gaadhiga oo waxaan qaadanayaa nasasho si aan u yara seexdo
Waxaan kordhinayaa xawaaraha si aan durba / dhakhso u tago
Waxaaan yaraynayaa xawaaraha si aan kordhiyo awooda falcelinta (reaktionsförmåga)
Waxaad u leexanaysaa dhinaca midig, ma waajib baa inaad istaagtid xaaladahan mid ka mid ah?
Haa, laakiin xaalada A oo kaliya
Haa, laakiin xaalada B oo kaliya
Waxaad habeyn ay taariikhdu tahay 15 maarso dhigatay baabuurkaaga wadadan ay ka shaqaynayso calaamadaan wadada. Waxaad gaariga qaadan doontaa subaxnimada 16 maarso. Xaggee la oggolyahay inaad dhigatid gaadhiga?
Dhinaca ay wadadu ka leedahay tiro kisi ah ama tiro is dheer
Labada dhinac ee wadada
Dhinaca ay wadadu ka leedahay tiro dhaban ah ama tiro is le'eg